Film Patrika » इन्टु धीरज, मिन्टु साम्राज्ञी !
१४ असार २०७५ |
इन्टु धीरज, मिन्टु साम्राज्ञी !
काठमाडाैं/ राेमान्टिक जनरामा एउटा फ्रेस फिल्म तयार भएकाे छ । फिल्मकाे नाम हाे ‘इन्टु मिन्टु लन्डनमा’ । याे धेरै कारणले फ्रेस लाग्छ ।
सबैभन्दा पहिला याे काेरियाेग्राफर रेनेशा बान्तवा रार्इकाे निर्देशन रहेकाे पहिलाे फिल्म हाे । त्यस्तै धीरज मगरले पनि अभिनयमा यसबाट डेब्यु गर्दैछन् । उनी युट्युब सेलिब्रिटी हुन् । फिल्म फ्रेस लाग्नुकाे अर्काे कारण, यसमा लन्डन र नेपालकाे ल्यान्डस्केपलार्इ फ्युजन गरिएकाे छ ।
काठमाडाैंकाे कुमारी हलमा बिहीबार अायाेजित कार्यक्रममा फिल्मकाे टिजर सार्वजनिक गरियाे । टिजर अाकर्षक बनेकाे छ । दर्शकलार्इ फिल्मप्रति काैतहुल बनाउने क्षमता टिजरमा देखिन्छ ।
प्रभुशम्सेर राणा लामाे समयपछि फिल्म निर्माणमा फर्केका हुन् । यसपालि उनलार्इ छाेरा प्रज्वलशम्सेर राणाले सघाएका छन् । फिल्मलार्इ भव्य र पर्फेक्ट बनाउन अाफूहरूले कुनै सम्झाैता नगरिएकाे निर्माता प्रज्वलले बताए ।
फिल्मकाे स्क्रिप्ट पढेदेखि नै अाफू माेहित भएकाे अनुभव यसकी नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहकाे छ । ‘म याे फिल्मलार्इ लिएर यति एक्साइटेड थिएँ कि, सुटिङ कहिले सुरू हाेला जस्ताे लागेकाे थियाे,’ साम्राज्ञीले भनिन्, ‘दर्शकले एउटा राम्राे फिल्म हेर्ने अवसर यसले दिनेछ ।’
लन्डनमै बस्ने धीरजले फिल्ममा अभिनय गरिएला भन्ने कहिल्यै साेचेका थिएनन् । तर, जब निर्देशक रेनेशाकाे अाँखामा उनी परे, फिल्मका लागि तयार बने । उनले फिल्म खेलेकामा उनका शुभचिन्तकहरू पनि खुसी छन् ।
निर्देशन गर्ने लामाे समयदेखिकाे सपना पूरा भएकाेमा प्रफुल्ल छिन् रेनेशा । साम्राज्ञी, धीरज र निर्माता प्रज्वलले अाफ्नाे भिजन बुझिदिएर नै अाफ्नाे सपना यथार्थमा परिणत भएकाे उनी बताउँछिन् । फिल्म निर्देशनमा हात हाले पनि काेरियाेग्राफीलार्इ भने निरन्तरता दिइरहने उनकाे याेजना छ ।
फिल्मकाे पटकथा रेनेशा र अभिमन्यु दीक्षितले लेखेका हुन् भने संवाद लेखनमा निर्देशक रेनेशालार्इ अाभाष कर्माचार्यले साथ दिएका छन् । शैलेन्द्र डि कार्कीकाे छायांकन, कृष्ण भण्डारीकाे सम्पादन र विक्रम लामा तथा अन्जिला खत्रीकाे काेरियाेग्राफी रहेकाे फिल्म अागामी असाेज ५ गते रिलिज हुने टुंगाे लागेकाे छ । यसमा सारूक ताम्राकार, विजय लामा, अर्जुन श्रेष्ठ, दिलभूषण पाठक, रूबी राणा शाह, विवेक लिम्बुलगायतले पनि अभिनय गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति १४ असार २०७५, बिहीबार १८:०८